Bolivia: Ny fiainan’ny mpamily fiara karetsaka any El Alto · Global Voices teny Malagasy
Bolivia: Ny fiainan'ny mpamily fiara karetsaka any El Alto
Voadika ny 07 Janoary 2010 16:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Nederlands, বাংলা, Italiano, 简体中文, 繁體中文, English
Ilay mpitoraka bilaogy Wilfredo Jordan avy any El Alto no nifantoka manokana amin'ny fiainan'ny mpamily fiara karetsaka iray miasa eny an-dalana rehetra eny isan'andro. Ho fanampin'ny ora maro iasany amin'ny karama faran'izay kely dia mifanehatra amin'ny toe-javatra mampalahelo matetika ireny mpamily fiara karetsaka ireny rehefa tojo ny mpandeha manana eritreritra hafahafa. Indro ny lahatsoratra vao haingana tao amin'ny bilaoginy:
Tsy misy vidiny ny fiainana, ary tena mahafantatra izany ireo mpamily fiara karetsaka. Ho an'ireto mpamily ireto dia eo ny fahasimban'ny fiara ampiasainy satria mividy kojakoja “brôkantera” matetika izy ireo, ny fitondrana fiara tsy am-pahamalinana ataon'ireo mpamily hafa, fisedrana ny asan-jiolahy izay indraindray hamoizana aina mihitsy, na efa manakaiky an'izany.
Jordán mitantara ny asan-jiolahy nifanehatra tamin'ireto mpamily fiara karetsaka ireto, mifanehatra amin'ny loza tena misy, tahaka izay niainan'i German Quispe, niharam-boina tamin'ny saika nanankendana azy tamin'ny kofehy nataon'ny mpandeha tao anatin'ny fiara nentiny, soa ihany fa avotry ny namany sandra nandalo teo izy. Mpamily fiara karetsaka anankiray hafa no sendra zavatra ohatr'izay tamin'ny volana martsa 2009:
Tahaka an'i Quispe dia nifanojo amin'ny zava-doza toy izay koa i Moises Chambi Blanco, 24 taona, ny 22 marsta 2009; nitondra mpandeha niainga avy tao La Ceja (toerana fitobiana anelanelan'i El Alto sy ny renivohitra La Paz) ho any Juan Azurduy de Padilla any amin'ny faritra Rio Seco. Rehefa tonga teo amin'ny làlana Laja, làlana tsy dia misy jiro loatra fa maizimaizina, dia namoaka poleta ny anankiray tamin'ireto mpandeha ka nitifitra azy teo amin'ny tarehiny.
Nieritreritra azy ho efa maty ireto mpamono olona ka nanipy azy teny an-tsisin-dalana; kanjo nahatsiaro tena ihany i Chambi ary naterina teny amin'ny hopitaly Sacré Coeur tao El Kenko.
Ankoatra ny zavatra mety hanjo dia nanao famaritana ny zavatra miandry ireo te hitondra fiara karetsaka i Jordan.
Manao io asa io ny ankamaroan'ny mpamily satria tsy mahita asa hafa hatao, ary tsy mahazo vola izy ireo raha tsy tena tompon'ny fiara entiny. Ny ora iasana ao anatin'ny 1 andro dia manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 8 ora alina, ary mahazo eo amin'ny 80 hatramin'ny 150 bolivanos eo (11 hatramin'ny 21 dôlara amerikana), ny 50 amin'io lasan'ny tompon'ny fiara ho sandan'ny hofany, ny 30 solika ary ny ambiny no an'ny mpamily.
Niresaka tamin'ny mpamily iray i Jordan izay nanaiky hijoro vavolombelona:
René Machicado, mpikambana ao amin'ny syndika Arco Iris, anankiray amin'ireo niaina ny zava-misy. 19 taona no nitondrany fiara karetsaka, rehefa avy niasa tao amin'ny Service National des Routes izy, izay nikatona ankehitriny, ka nanapa-kevitra izy ny hiasa tenany.
“Amin'izao fotoana izao dia tsy mampiditra mpiasa raikitra intsony ny toeram-piasana, ary tsy ho mpiasa raikitra tahaka ny taloha izany ianao. Amin'izao fotoana izao dia mpiasa miasa amin'ny fotoana voafetra ihany no raisina, ary tsy mahaliana ilay satria tsy tena asa azo antoka intsony” hoy izy, nampiany koa fa ny mitondra fiara karetsaka, ankoatra ny maha asa mampatahotra azy, dia mitaky famoizan-tena betsaka, satria tsy maintsy miaritra eny ianao mandritra ny andro manontolo, ao koa ny miasa alina, izany hoe misy tokoa ny mampatahotra.
Tsy zavatra foronina ny loza mety hahazo: manambara ny antontan'isa fa tao anatin'ny 8 volana nandritra ny taona 2008 dia mpamily fiara karetsaka 10 no maty ary nangalarina ny fiarany.
1 herinandro izayBrezila
3 herinandro izayEtazonia
Amerika Latina : Ny dian'ireo mpifindramonina
Pastora Angoley maromaro nisintaka tamin'ny Eglizin'ny Fanjakan'Andriamanitra Erantany
08 Janoary 2010, 03:09
Hiresaka koa -> eduardo ávila